EMoscow: nemvelo. Okunhlobonhlobo, izici ezikhangayo
Isifunda eMoscow itholakala maphakathi East European Valley. Futhi phakathi kuba eMoscow, kanye nesimo lapho kubangelwa ngokuyinhloko indawo yayo hhayi okuningi ukuhluka ubunjalo nedlelo futhi sonke isifunda.
kwendawo eklanywe njengomumo womhlaba
Ukuze enyakatho yenhloko-dolobha Russian is waqala ukugcwala Upper iVolga elisezansi naseningizimu amanga amagquma Smolensk-Moscow upland. Endaweni kukhona amachibi amaningi kanye nemifula, kusukaphi ikakhulukazi Klin-Dmitrov Ridge (North-western ingxenye Smolensk-Moscow upland), okuyinto nakangaka, bese ugelezela noma zibe iVolga, noma Oka. I Moskva-Oka ecaciswayo ilungu wakhe Teplostanskoy upland oluthatha enyakatho-ntshonalanga ye nesifunda eMoscow. , Kuyo le ntaba kuyinto iphuzu esiphezulu (253 metres), okuyinto inama eMoscow ngqo uqobo. Nature ezizungezile dolobha kunqunywa futhi elisezansi exhaphozini Mescherskaya, engenayo, zivela empumalanga nesigaxa kwakhiwa Klyazma futhi Moskva emfuleni. Zaokskaya ethafeni uvala endaweni kusukela eningizimu.
Unqenqema yemifula, amachibi asezintabeni, amahlathi ...
Izimfunda ezingasogwini lwe-Plain, amagquma, emifuleni, okuyinto endaweni kukhona izingcezu mayelana 2000, konke lokhu inquma khona othile sezulu, flora nezilwane ezihlukahlukene njani esifundeni eMoscow eMoscow uqobo. Ubunjalo dolobha kanye nesifunda kwalo, enhle ngendlela engaphezu kwevamile, yize esebenzayo umthelela yabantu (ngokuphelele noma iluphi uhlobo umsebenzi womuntu maqondana nohlobo). oki Relict namahlathi coniferous ukumboza 40% yonke indawo, kuyilapho edolobheni emahlathini embozwe 42% (2168 ha) endaweni. Meadows, amasimu, buthule egeleza emifuleni, bogs (ngamabhethri avamile kwezulu) kanye nemihosha evikelwe - ngakho libukeka ubunjalo eMoscow nesifunda.
Ukuze asindise bonke ubukhazikhazi nemvelo, umuntu, eqinisweni, isitha ezibaluleke kakhulu, ezama ukwenza konke okusemandleni ami. It kuvula evikelwe umnotho, ezifana "Zavidovo", noma zokulondolozwa ezifana "Moose Isiqhingi", ehlanganisa masimu Oka Biosphere Reserve. Edolobheni, abaningi amahlathi yesibili, likhule esizeni zifake Amasimu. Yehluka emahlathini eyinhloko lula isakhiwo kanye ukungcola enkulu birch kanye aspen. E-Moscow uqobo, futhi, u-40% umuzi ezembethe amahlathi, phakathi okuyinto 21% are elalihlala emahlathini kaphayini (Serebryany eBor, kabani indawo kukhona izihlahla zikaphayini abaneminyaka kuze iminyaka 170). amahlathi sonwele kakhulu ebucayi ukungcoliswa, wahlala encane kakhulu -% 2 kuphela. On Losiny Ostrov kusenabantu izimo ubudala kuze iminyaka 130. Moscow amahlathi lezihlahla isakazwe uhlobo kanje: - 10% oki (Izmailovskiy epaki), Basswood -18% birch ithatha 39 endaweni%, e-aspen - 4%.
Izinhlobo amahlathi itshalwe eMoscow nesifunda
Ikakhulukazi ubunjalo eMoscow ngenxa yokuthi ukuthi yena, njengabo bonke abanye esifundeni, sitholakala confluence ehlathini-asemaqeleni kanye ihlathi esishintshashintshayo. Lokho, kulesi sifunda into ihlaza khona. Enyakatho nasentshonalanga endaweni elalihlala phakathi-sonwele and kaphayini amahlathi. Meshcherskaya elisezansi okuthakazelisayo ingxenye esempumalanga zikaphayini embozwe ehlathini afanayo futhi elisezansi exhaphozini imithi Alder. Centre of esifundeni futhi kuwo eMoscow, ubunjalo okuyinto ecebile eningizimu ehlathini coniferous-lezihlahla amahlathi, igcwele firs futhi Pines, birches futhi aspens, kanye nokubusa esinindolweni of hazel. Ngaseningizimu - embusweni oki ezibanzi enezicabha, ngaphezu lapho zikhona holly ne-maple, futhi Elm kanye Linden. Futhi kule ndawo zone inguquko (kusuka asemaqeleni ukuze asemaqeleni) egqumeni eMoscow-Oka namanje wathola zokutshala sonwele isibonelo, elingenhla Lopasnya River. Kodwa eduze eningizimu kuya kuba yonkana amahlathi, asemaqeleni-like iziqhingi oluhlaza phakathi emathafeni, oki, umlotha ne-maple izihlahla. I eningizimu okwedlulele endaweni imbozwe ihlathi asemaqeleni, okuyinto cishe ngokuphelele eshayisa futhi engafakwanga ifomu yayo yasekuqaleni, ngisho kusele izingxenyana nje ze.
Kubalulekile wazi iqiniso ukuthi esikhathini sethu kuyinto WOKUTSHALA IZIHLAHLA asebenzayo. Futhi kubonisa umuntu ujike nemvelo, adikile umthengi zengqondo kuphela. On Shaturskie Lukhovitsky nasemaxhaphozini esisogwini olusempumalanga ye esifundeni, ngokuya baqala ukuhlangana zifiki phakathi izitshalo lwendabuko.
Nobuhle ngeke besabulawa
Lemisebenti womuntu oshiwo ngenhla ihlanganisa ukufuduka kwabantu beya emadolobheni zensimu, ekuqongeleleni inani elikhulu labantu, ukutholakala kanye nokwakhiwa okuqhubekayo imigwaqo nojantshi, Hydrography ushintsho endaweni (umfula ukulungiswa, ukuvela amadamu amasha, njll), inqwaba izindlu, konke ukuthi kufanele kuhambisane nedolobha elikhulu kunawo wonke, inhloko-dolobha isimo omkhulu. Nokho, ubunjalo eMoscow nesifunda eMoscow wakhohliswa kanye Yuriya Dolgorukogo, futhi namuhla okuhle kakhulu futhi ezihlukahlukene.
Naphezu isinyathelo womuntu yinhlekelele, kwasala, noma babe abameleli abaningi emhlabeni isilwane. Ngaphakathi esifundeni azungeze eMoscow futhi siphile 60-70 zezilwane ezincelisayo. Ngaphandle kwabo, lapho zitholakala ezihuquzelayo (6), izilwane eziphila emanzini nasezweni (7), inhlanzi (40). Futhi mingaki izinyoni lapha! Ezinhlotsheni ezingu-120 abahlala emadolobheni asemaphethelweni, 29 ukungena ezindaweni ezimaphakathi komuzi. Futhi kule ndawo, kukhona izinhlobo kuka 200 abahlala lapha unomphela noma kukhona izinyoni nobubanzi besandla. Izinambuzane nazo omningi - 135 zezimvemvane, 300 (owodwa lweshumi bumblebee) zilwane lezinyosi. izintethe Ngaphezu kwalokho, kutholakala lapho abangamashumi (8), isikhonyane (23), phansi mabhungane, izimbungulu, dragonfly, izintuthwane, izimpukane ethulwa ndawonye 50th zilwane. 9 Futhi bangena Incwadi Red - 4 izinhlobo blues, futhi 5 zinhlobo izintuthwane. Ubumsulwa amanzi eMoscow uthi kunabantu abaningi eziningana izimfudu ezindaweni ezahlukene esifundeni. INcwadi Red babhaliswa nambili izinhlobo zezilwane ophilayo ngaphakathi esifundeni Moscow.
Wildlife ukwehluka eMoscow
Ehlathini zezilwane, okuyizinkinga ezivamile kakhulu emkhakheni, nonogwaja obubekwe ngaphambili futhi izingwejeje ezindizayo. Lezi zinyoni ezivamile grouse capercaillie, bullfinch kanye Tit willow, crossbill-Elovikov, futhi Redwing inyoni emnyama yaseNgilandi-ryabinovik. Izinhlobonhlobo imvelo eMoscow imelelwa zilwane izilwane kangaka ezinkulu ezitholakala emahlathini lezihlahla, Roe izinyamazane kanye izingulube zasendle, nezimagqabhagqabha inyamazane futhi marten zikaphayini, mink kanye polecat. Iseduze edolobheni elikhulu siphile Sony futhi isikhova tawny. kuthiwa Kungani lezi zinhlobo zibizwa maqondana hhayi kuphela esifundeni, kodwa eMoscow ngokwayo? Ngoba omunye amapaki wokuqala wezwe lonke Russia - "Moose" isiqhingi ", lapho cishe bonke laba izilwane bahlala, isendaweni ensimini ka eMoscow, phakathi komkhawulo edolobheni.
Isimo sezulu esipholile zamazwekazi eMoscow, eqinisweni, aphuma ethambile abukhali yezwekazi European Asian. Kafushane, isimo salo sezulu eMoscow kutfokomele kakhulu - ebusika kuqhathaniswa omnene ehlobo kuqhathaniswa ezinomswakama. Wancoma izizukulwane eziningi zabuna isiRashiya, imvelo ongowokuzalwa eMoscow abaseduze nawe futhi obakhonzile zonke isiRashiya, hhayi kuphela ngoba uthando kuza umuntu nge obisini lukanina, kodwa futhi ngoba Akumangalisi ezinhle ngempela. Kwanele ukubona zokuhlola imidwebo ngabaculi Russian nge butholakale ukuze baqinisekise ukuthi le mibono akuwona amazwi angasho lutho. Umkhaya kanye kubonakale polenovskie "eMoscow Yard" futhi "Garden Logogo" uyakujabulela Pimenovsky "okusha eMoscow", kodwa inhliziyo yami iba buhlungu kusuka amakhulu emifanekiso abaculi bendawo, esibonisa ubunjalo izwe lazo lendabuko. Moscow - bomdabu idolobha isiRashiya, isenkabeni wengxenye European yeRussia, ngakho-ke uhlobo eMoscow limelela Russia, nakuba ubunjalo zwe elikhulukazi omunye ezinye ingxenye isibonisi kunzima.
ezikhangayo Yemvelo eMoscow
Ngo eMoscow nesifunda eMoscow eziningi ezikhangayo zemvelo. Lezi zihlanganisa ngokuyinhloko, "Serebryany Bor" futhi "Moose Isiqhingi". kodwa "Black Lake" futhi "Botanical Garden Vilar" kungaba ngokuthi i uhlu umxhwele. izinto Kuyathakazelisa ukuthi "iSigodi kukaJesu Mitino emfudlaneni" futhi "Yemvelo Reserve Krylatskiye amagquma." Kanye "Biruliovsky Arboretum" futhi "Big Vostryukovsky Echibini" futhi abambalwa ezikhangayo zemvelo, ngokuvakashela okuyinto ungathola umbono wokuthi uhlobo eMoscow nesifunda eMoscow.
Uyini ukwesekwa Imininingwane?
Smolensk inqaba: umbhoshongo, incazelo yabo. Thunder Smolensk inqaba umbhoshongo
Sauna "endaweni Water" (Chelyabinsk) - iyipharadesi kubathandi yamanzi ukuzijabulisa
Bykhov Castle: emanxiweni edume kakhulu Belarus
Tselinograd esifundeni: incazelo, izici, izindawo kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Umuthi 'Vimaks ": ukubuyekezwa, yokusetshenziswa, incazelo kanye nokusungulwa
Multi-tariff ezintathu okhombisa amandla imitha bese ugcine imali yakho
Academician Logunov AA:. Biography nokuthola
Indawo eyinkimbinkimbi yokuhlala "Iziqephu ZaseSpain" (i-LCD "Izingqungquthela zaseSpain"): incazelo, inqubekela phambili yokwakhiwa
Udubule kanjani "ama-shades ama-gray" angu-50? Amaqiniso anentshisekelo
Amafutha e-Sea buckthorn, isicelo.
Isigaba 204 se-Code Criminal. Ukufumbathisa kwezohwebo enkambisweni yenkantolo
Mercedes E320 - isiko sha
Indlela yokwenza eyizidleke for engadini